MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward7th Anniversary Special Package MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPTနှင့်KSGMတို့၏ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (၇)နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နေ့ရောညပါ စိတ်ကြိုက် အကန့်အသတ်မရှိ Facebook သုံးနိုင်တဲ့ 7th Year Anniversary Special ပတ်ကေ့ချ်ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။
အောက်တိုဘာလ ၅ရက် ~ အောက်တိုဘာလ ၁၁ရက်
*Voice call, video call များနှင့် Facebook မှတစ်ဆင့် click နှိပ်ပြီးပြင်ပ Websiteများ၊ link များကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းများ ကို ၀ယ်ယူထားသော Data Pack (သို့မဟုတ်) Pay-As-You-Go Rate ဖြင့် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။
MPT4U Appမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူရန်
၁။ Unlimited Facebook ကို ရယူပြီးသည်နှင့် Facebook Data ကို Facebook App/ Browser မှ Facebook (ပြင်ပ links များမပါဝင်) နှင့် Messenger (Voice, Video calls များမပါဝင်) အတွက် အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ အပူအပင်မရှိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၂။ Facebook မှ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုတင်ခြင်း၊ Video/livestreaming ကြည့်ရှုခြင်း များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၃။ Voice call, video call များနှင့် Facebook မှတစ်ဆင့် click နှိပ်ပြီးပြင်ပ Websiteများ၊ link များကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းများကို ၀ယ်ယူထားသော Data Pack (သို့မဟုတ်) Pay-As-You-Go နှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ပက်ကေ့ချ်အသုံးပြုနိုင်သော သက်တမ်းကာလမှာ (၇) ရက် ဖြစ်ပါသည်။
၅။ဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ် သက်တမ်းမကုန်ဆုံး သေးပါက တူညီသော ပက်ကေ့ချ်ကို ထပ်မံဝယ် ယူ၍မရပါ။ ယင်း ပက်ကေ့ချ် ၏ သက်တမ်းကုန်သွားပါက ၇၇၇ ကျပ်ဖြင့် ထပ်မံ ပြန်လည် ၀ယ်ယူနိုင် ပါမည်။ (သတ်မှတ်ထားသော ပရိုမိုးရှင်း ကာလအတွင်းသာ အကျုံးဝင်ပါသည်။)
၆။ဆွေ/ရှယ်/ရွှေ အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA Prepaid/Postpaid အသုံးပြုသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၇။CDMA နှင့် Base Tariff အသုံးပြုသူများ နှင့်လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသူများဝယ်ယူနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
၈။ပက်ကေချ့်ကိုတခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလိုပါက MPT4U app မှတစ်ဆင့် လက်ဆောင်ပေး မည့် ဖုန်းနံပါတ် ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၉။ *224# သို့ဖုန်းခေါ်ဆို၍လည်းကောင်း(သို့) MPT4U App မှတဆင့် လည်းကောင်း ပက်ကေ့ချ် ရဲ့ သက်တမ်း ကို စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။
၁၀။ ထိပေါက် chance မရရှိပါ။
၁၁။ ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၂၀ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ ဖြစ်ပါသည်။
၁။ 7th Year Anniversary Special Pack (Unlimited Facebook Pack) ဆိုတာ ဘာလဲ?
7th Year Anniversary Special Pack ဆိုတာကတော့ MPT-KSGM ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (၇) နှစ် သို့ရောက်ရှိခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အချိန် အကန့်အသတ်မရှိ Facebook ကို အပူပင်ကင်းစွာ စိတ်ကြိုက်သုံးစွဲနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတဲ့ ပက်ကေ့ချ် ဖြစ်ပါတယ်။
Unlimited Facebook ပက်ကေ့ချ် ၇၇၇ ကျပ် ၇ ရက် အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ Facebook App, Messenger နှင့် Browser မှ Facebook အဝသုံး [Facebook ပြင်ပ links များနှင့် Messenger
မှ voice call, video call ခေါ်ဆိုခြင်းများ မပါ] MPT4U
ဟုတ်ပါတယ်။ ပက်ကေ့ချ်ဈေးနှုန်းမှာ အခွန် ၅% ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ဝယ်ယူရရှိတဲ့ Facebook ဒေတာကို ဘယ်လို သုံးစွဲနိုင်မှာပါလဲ။
ဝယ်ယူရရှိတဲ့ အကန့်အသတ်မရှိ Facebook ဒေတာကို Facebook App (App ပြင်ပ links များမပါဝင်), Messenger (Voice, Video calls များမပါဝင်) နှင့် Browser မှ Facebook အသုံးပြုခွင့်ကို (၇) ရက် သက်တမ်း ဖြင့် အချိန်မရွေး သုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ပက်ကေ့ချ်ကို ဘယ်သူတွေ ရယူအသုံးပြုနိုင်မှာလဲ?
MPT မှ ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကား အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA prepaid & postpaid အသုံးပြုသူများနှင့် လက်ရှိ အသုံးပြုနေသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ CDMA နှင့် Base Tariff အသုံးပြုသူများ နှင့်လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသူများဝယ်ယူနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
၅။ Facebook Data က အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့လား?
မဟုတ်ပါ။ အချိန် အကန့်အသတ်မရှိ တစ်နေ့လုံး တစ်ညလုံးသုံး Facebook ကို အပူပင်ကင်းစွာ စိတ်ကြိုက်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
၆။ Facebook မှ ဓာတ်ပုံ၊ဗီဒီယိုတွေတင်လို့ရလား? Videos တွေကြည့်လို့ရမှာလား?
ဟုတ်ကဲ့၊ Facebook မှ ဓာတ်ပုံ၊ဗီဒီယိုတွေတင်လို့ရပါတယ်။ Video/livestreaming များကို အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ စိတ်ကြိုက် ကြည့်နိုင်မှာပါ။ Facebook Data ကို Facebook App/ Browser မှ Facebook (ပြင်ပ links များမပါဝင်) နှင့် Messenger (Voice, Video calls များမပါဝင်) အတွက် အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ အပူအပင်မရှိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Voice call, video call များနှင့် Facebook မှတစ်ဆင့် click နှိပ်ပြီးပြင်ပ Websiteများ၊ link များကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းများကို ၀ယ်ယူထားသော Data Pack (သို့မဟုတ်) Pay-As-You-Go နှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၇။ ပက်ကေ့ချ်ကို ဘယ်လိုရယူအသုံးပြုနိုင်မှာပါလဲ။
ပက်ကေ့ချ်ကို MPT4U Applicationမှ မှတဆင့် ရယူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၈။ Unlimited Facebook Pack ကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ရပါသလား?
ရပါတယ်။ တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလိုပါက MPT4U application မှတစ်ဆင့် လက်ဆောင်ပေးမည့် ဖုန်းနံပါတ် ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၉။ အကန့်အသတ်မရှိ Facebook ဒေတာ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါသလဲ။
အကန့်အသတ်မရှိ Facebook ဒေတာ သက်တမ်းကတော့ (၇) ရက် ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ ပက်ကေ့ချ်သက်တမ်းကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မှာလဲ?
ပက်ကေ့ချ်သက်တမ်းအတွက် *224# ကို ခေါ်ဆိုပြီး (သို့မဟုတ်) MPT4U App မှတဆင့် စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
၁၁။ ပက်ကေ့ချ် ရဲ့ expire date ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်မှာလဲ?
ပက်ကေ့ချ် ရဲ့ သက်တမ်း ကို real time date ဖြင့် သတ်မှတ်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ- အောက်တိုဘာလ(၅)ရက်နေ့ရဲ့ မနက်၁၀နာရီမှာ ဝယ်ရင် အောက်တိုဘာလ(၁၂)ရက်နေ့ မနက် ၁၀နာရီမှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါသည်။ Customerတွေအတွက် အကျိုးရှိစေမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၁၂။ ပက်ကေ့ချ်ကို အကြိမ်အရေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
ဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ် သက်တမ်းမကုန်ဆုံး သေးပါက တူညီသော ပက်ကေ့ချ်ကို ထပ်မံဝယ်ယူ ၍မရပါ။ ယင်း ပက်ကေ့ချ်၏ သက်တမ်းကုန်သွားပါက ၇၇၇ ကျပ်ဖြင့် ထပ်မံ ပြန်လည်၀ယ်ယူနိုင်ပါမည်။ (သတ်မှတ်ထားသော ပရိုမိုးရှင်း ကာလအတွင်းသာ အကျုံးဝင်ပါသည်။)
၁၃။ ပရိုမိုးရှင်းကာလက ဘယ်အထိလဲ?
ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၂၀ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ အထိ ဖြစ်ပါတယ်။